Gaalmudug: Diyaar Baan u Nahay Difaaca Dalkeenna Iyo Dadkeenna – Goobjoog News
Gaalmudug: Diyaar Baan u Nahay Difaaca Dalkeenna Iyo Dadkeenna
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in mar walbo ay diyaar u yihiin difaaca dalka iyo dadkooda, islamarkaana ay garab siin doonaan cid walbo oo isku diyaarisa in dalka ay difaacdo.
Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi oo ka hadlayey dagaal dhawaan dad deegaanka ah iyo Al-shabaab ku dhexmaray deegaanno hoostaga degmada Xarardheere ayaa sheegay in shacabka ay ka caawin doonaan wax walbo oo Galmudug uga soo baahdaan.
Waxa uu madaxweyne ku xigeenka Galmudug ku adkeeyey shacabka ku dhaqan deegaannada uu maamulkaasi ka arrimiyo in mar walbo ay iska kaashadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen Al-shabaab iyo cid walbo oo amni xumi waddo.
“Dadka deegaanka waxaan kaga mahadcelineynaa difaaca ay sameeyeen iyo shaqooyinka ay hayaan, annagu waxaan u caddeyneynaa inaan garab taagannahay, haddii aan Galmudug nahay waxaan diyaar u nahay difaaca dadkeenna iyo dalkeenna” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Dagaal u dhaxeeyay dad shacab ah iyo sidoo kale Al-shabaab ayaa dhowaan waxa uu ka dhacay deegaanno hoostaga degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan.
Fidel Castro, Madaxweynihii Hore Ee Cuba Oo Ku Geeriyooday Da’da 90-ka
Dib u Sixid Lagu Sameeyay Hannaanka Doorashada Dadban ee Somaliland
Danjire Keating Oo Cadaado Gaaray Iyo Kulan Ka Socda Madaxtooyada Galmudug (SAWIRRO)